Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada
Si kasta oo ay mashquul u tahay, u walaac badan tahay, ama khalkhal u leedahay maalintaadu, waxaad had iyo jeer isku hallayn kartaa qubeys weyn oo aad ku nasato oo aad ku nasato Dabcan, nidaamka tubbada qubeyskaaga ayaa door ka ciyaaraya sida loo cusbooneysiiyo y ...
Jikadaada ayaa ka badan meel lagu wada tuuro casho. Waa goob isugu timaadda gurigaaga, iyo qoysas badan, waxay u tahay il diirimaad iyo farxad. Tuubbada saxda ah ee jikada ayaa dhameystiri doonta ...
Marka ugu horeysa ee aad jaleecdo gurigaaga, waxaad arkaysaa qaab guud iyo fikrad. Haddii aad higsaneysid muuqaal casri ah, mid dhaqameed, mid dhaqameed, ama mid casri ah, gurigaaga ayaa ku siinaya muuqaal gaar ah markaad ...
Matte madow waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu casrisan ee lagu dhammeeyo goobta qasabadda iyo waxyaabaha kale ee jikada iyo musqusha, waana mid caan ah. Inta udhaxeysa midabka cajiibka ah ee geesinimada leh iyo sheen raaxo leh o ...
Doorashada qasabadda musqusha ee saxankaaga ayaa u ekaan kara go'aan fudud illaa aad ka bilowdo inaad aragto inta ikhtiyaar ee la heli karo. Waxaa jira qaabab kala duwan, midabbo iyo dhameystir, xamili sty ...
2021 / 01 / 28 2951
Isbeddelada qurxinta guryaha ayaa la beddelaya mawjadaha sida isbeddellada qayb kasta oo nolosha ka mid ah, laga bilaabo moodada illaa timaha. Weli, waxaa jira waxyaabo xubno qurxin ah oo sannado badan isbeddel ku socday oo aan lahayn calaamado muujinaya ...
2021 / 01 / 27 2050
Ka dib markaad soo xulatay qubeyskaaga, barkadda qubeyska, wax aan waxba tarayn, sagxadda dhulka, iyo midabka gidaarka, tubbada musqusha ayaa laga yaabaa inay dareemaan inay yihiin faahfaahin yar. Run ahaantii, in kastoo, waxay noqon karaan qayb naqshadaysan oo runtii ti ...
2021 / 01 / 10 3681
Iyada oo qaabab badan oo ka mid ah alaabada musqusha ay suuqa ugu jiraan, farshaxanka dusha sare ayaa sidoo kale loo baahan yahay in badan. Markii ugu horreysay ee aad indhaha ku qabato tuunbada jikada madow, waxaad ogtahay inay tani tahay ...
2021 / 01 / 10 3285
Shaqaale kasta oo xafiis ka tirsan wuu ogyahay in markii nalagu qasbo in subax kasta nala toosiyo, haddii aan rabno inaan ka takhalusno hurdo la'aanta sida ugu dhakhsaha badan, saaxiibbada qaarkood waxay ku degdegi doonaan qubeyska ...
2020 / 12 / 21 8518
Nolol maalmeedka, waxaad had iyo jeer la kulmi doontaa xaaladda rakibidda giraanyada tuwaalka. Haddii aadan khibrad u lahayn rakibidda giraanti shukumaan, waxaan ka baqayaa inay dadku dareemaan khasaare markii ay arkeen i ...
2020 / 11 / 19 7159
Doorashada qasabadda jikada waa hawl xiiso leh oo aad ka heli karto fursado badan oo muujinaya qaab, adkeysi iyo muuqaal qurxoon. Dhinaca kale, waa shay khiyaano ah oo aanad dooran karin ...
2020 / 11 / 19 6770
Dareer yar oo ka yimaada tuubada cilladaysan ayaa u muuqan kara wax yar oo dhib ah, laakiin xaqiiqdii waxay kugu kici kartaa kumanaan kun oo doolar sanadkii muddo dheer. Kahor intaadan dooran inaad ka iibsato qasabadaha khadka tooska ah waxay u fiicnaan doontaa in ...